नेपाल हैजा: कपिलवस्तुमा अझै नियन्त्रणमा आएन, प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्न साढे दुई लाख मात्र खोप ल्याइँदै::Jalpa Khabar
Published on: २२ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:०१
एक महिनादेखि कपिलवस्तु जिल्लामा फैलिएको हैजा रोग अझै पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेकाले सरकारले हैजाविरुद्धको खोप लगाएर रोग नियन्त्रणमा ल्याउन लागिएको जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (यूनिसेफ) मार्फत् उक्त खोप नेपालमा आउने बताइएको छ।
गत असोज १८ गतेदेखि कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा झाडापखाला र बान्ताका बिरामीहरू देखिन थालेका थिए।
प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा हैजा भएको प्रमाणित भएको थियो।
हालसम्म हैजाबाट १,३२९ जना प्रभावित भएको तथा छ मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। अझै दुई जनाको उपचार भइरहेको छ।
आवश्यक खोपको जोहो भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका इपिडिमियोलोजी तथा रोग महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
“हामीले दुई लाख ५२,३६३ डोज खोप स्वीकृति भएको पत्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट पाएका छौँ। कृष्णनगर, महाराजगन्ज, शिवराज, विजयनगर र यशोधरा लगायतका पालिकाका जोखिममा रहेको जनसङ्ख्या हेरेर मगाइएको हो,” उनले भने।
“विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट स्वीकृत भएको खोप यूनिसेफको संयन्त्रबाट आउँछ। युनिसेफको कहिले पठाउँछ त्यो कुरेर बसिरहेका छौँ आउनासाथ लगाउने योजना छ।”
उनले भने “त्यहाँलगायत अन्य ठाउँमा यदि हैजाविरुद्धको खोप लगाउनुपर्‍यो भने फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सबै अवस्था चित्रण गरेर माग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खोप खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको भण्डारमा मात्रै छ। हाम्रो दक्षिण एशियाका हैजा देखिने देशहरूमा समेत छैन।”
केही निश्चित क्षेत्रहरू हैजा फैलिने ‘पकेट’ क्षेत्रमा रूपमा रहेको र त्यहाँ कहिले देखिने हो भन्न सक्ने अवस्था नरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।
एक पटक हैजा देखिएको क्षेत्रमा १५/२० वर्षपछि पनि हैजा देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
डा. मरासिनी भन्छन्, “पिउने पानीलाई सुरक्षित बनाउने संयन्त्रको राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन। देशलाई खुला दिसामुक्त देश भनेर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा पानीको अभावका कारण चर्पीको प्रभाकारी प्रयोग नहुँदा समस्या देखिने गरेको छ।”
पहिले रोग लाग्न नदिन जनचेतनामा जोड दिने गरिएकोमा पछिल्ला दिनमा जनचेतनाभन्दा उपचारमा मात्रै ध्यान बढी केन्द्रित गरिएका कारण पनि समस्या आएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।